အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲစားလို့ သွေးတိုးမှာကြောက်တဲ့ယောင်းတို့အတွက် နို့စိမ်းအစားထိုးချက်နည်း – For her myanmar
Posted on April 24, 2019 April 24, 2019 Author Yin Sandi Ko	Comment(0)
သွေးတိုးမှာကြောက်လို့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲရှောင်ခဲ့သမျှ အတိုးချစားလို့ရပြီလေ 😋 🤤
ယောင်းတို့ရေ.. မြန်မာရိုးရာမုန့် တော်တော်များများက အုန်းနို့ကို အသုံးများတော့ သွေးတိုးရှိတဲ့သူတွေမှာ မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရတဲ့ ဘဝမျိုးတွေ.. 🙁 မင်မင်ဆို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲအရမ်းကြိုက်ရဲ့နဲ့ သွေးတိုးမှာကြောက်လို့ မစားရအညှော်ခံဖြစ်ခဲ့ရပေါင်းလည်း မနည်းဘူးရယ်။ စားကလည်းစားချင်သေး၊ သွေးတိုးမှာလည်း ကြောက်နေရတော့ အုန်းနို့အစားထိုး နို့စိမ်းလေးနဲ့ စမ်းပြီးချက်စားကြည့်တာ အားပါးပါး ကောင်းမှကောင်းပဲ။ အုန်းနို့နဲ့စားတုန်းကလို ခေါင်းမူးရီဝေတာတွေ လုံးဝမဖြစ်ဘဲ စိတ်ကြိုက်အဝဆွဲနိုင်တော့ နိ်ု့စိမ်းခေါက်ဆွဲကို တော်တော်လေး ဓာတ်ကျမိ… ယောင်းတို့ကို ချက်ကျွေးဖို့အခြေအနေမပေးသေးပေမဲ့ ချက်နည်းလေးတော့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. အက်ဒ်မင် လိုင်းပေါ်ကနေ ချက်ကျွေးတယ်လို့ သဘောထားပြီး ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့….
Related Article >>> ဆိမ့်ဆိမ့်ချိုချိုအရသာလေးကြောင့် စားပြီးရင်းစားချင်နေမယ့် အုန်းစိမ်းဂျယ်လီကျောက်ကျောလုပ်နည်း
နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲချက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ –
Related Article >>> ဆေးဘဲဥကို ညှီနံ့မထွက်ဘဲ အရသာရှယ်ထွက်အောင် ကိုယ်တိုင်သုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း
၁-ကြက်သားကို ခပ်သေးသေးအတုံးလေးတွေတုံးပြီး ကြက်သားမှုန့် ၊ နနွင်းလက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဇွန်း ရောထည့် ၊ သမအောင်နယ်ပြီးနှပ်ထားပါ။
၂-ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကိုထောင်းပြီး ၊ ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်နဲ့ရော ၊ ဆီ ဟင်းခပ်ဇွန်း(၂)ဇွန်းစာ ထည့်ထားတဲ့ ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီမွှေးသတ်ပေးပါ။
၃-ငရုတ်သီးအရောင် နီညိုရောင်သမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ နှပ်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကို ရောထည့်ပြီး ၊ ငံပြာရည်ထည့် ၊ ရေမြှုပ်အောင်ထည့်ပြီး တစ်ရေခမ်းသွားတဲ့အထိ ချက်ပေးပါ။
၄-ကြက်သားအိုးချက်နေချိန်မှာ ပဲအစိမ်းမှုန့်ကို ရေနို့ဆီဘူး(၃)ဘူးစာလောက်နဲ့ ဖျော်ပြီး အိုးတစ်အိုးထဲ ထည့်ကာ ပဲအနံ့သင်းလာတဲ့အထိကျိုပေးပါ။ (အိုးမကပ်အောင် အဆက်မပြတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမွှေပေးရပါမယ်)
၅-ကြက်သားတစ်ရေခမ်းချိန်မှာ နို့စိမ်းတစ်ဘူးလုံးထည့်ချက်ပြီး နို့စိမ်းရဲ့အစိမ်းအနံ့ပျောက်တဲ့အထိ ချက်ပေးပါ။
၆-နို့စိမ်းနဲ့ကြက်သားပေါင်းစပ်ပြီး အနံ့မွှေးမွှေးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပဲစိမ်းမှုန့်ကျိုထားတဲ့အိုးထဲ ထည့်ချက်ပေးပါ။
၇-ပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါမှာတော့ အရသာမြည်းကြည့်ပြီး အပေါ့အငံစိတ်ကြိုက်ပြုင်နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ထမင်းပိုမြိန်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ဆိတ်သားလက်ဖက်ထောင်းလုပ်နည်း
ဒါဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆွဲ ၊ အကြော် ၊ ပဲသွေး ၊ ငါးဖယ်တို့နဲ့ တွဲဖက်စားနိုင်မယ့် အုန်းနို့အစားထိုး နို့စိမ်းဟင်းရည် ရရှိပါပြီ။ လုပ်ရတာလွယ်ကူသလို သွေးတိုးမှာလည်းမကြောက်ရတဲ့ နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲမို့ ယောင်းတို့သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ မွှေးမွှေးလေးမို့ ခံတွင်းတွေ့မှာအသေအချာပါပဲ။
နောက်ထပ် ဘယ်လိုချက်နည်းလေးတွေ မျှဝေပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်။
သှေးတိုးမှာကွောကျလို့ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲရှောငျခဲ့သမြှ အတိုးခစြားလို့ရပွီလေ 😋 🤤
ယောငျးတို့ရေ.. မွနျမာရိုးရာမုနျ့ တျောတျောမြားမြားက အုနျးနို့ကို အသုံးမြားတော့ သှေးတိုးရှိတဲ့သူတှမှော မွငျသာမွငျရ မကွငျရတဲ့ ဘဝမြိုးတှေ.. 🙁 မငျမငျဆို အုနျးနို့ခေါကျဆှဲအရမျးကွိုကျရဲ့နဲ့ သှေးတိုးမှာကွောကျလို့ မစားရအညှျောခံဖွဈခဲ့ရပေါငျးလညျး မနညျးဘူးရယျ။ စားကလညျးစားခငျြသေး၊ သှေးတိုးမှာလညျး ကွောကျနရေတော့ အုနျးနို့အစားထိုး နို့စိမျးလေးနဲ့ စမျးပွီးခကျြစားကွညျ့တာ အားပါးပါး ကောငျးမှကောငျးပဲ။ အုနျးနို့နဲ့စားတုနျးကလို ခေါငျးမူးရီဝတောတှေ လုံးဝမဖွဈဘဲ စိတျကွိုကျအဝဆှဲနိုငျတော့ နို့စိမျးခေါကျဆှဲကို တျောတျောလေး ဓာတျကမြိ… ယောငျးတို့ကို ခကျြကြှေးဖို့အခွအေနမေပေးသေးပမေဲ့ ခကျြနညျးလေးတော့ ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျနျော.. အကျဒျမငျ လိုငျးပျေါကနေ ခကျြကြှေးတယျလို့ သဘောထားပွီး ဖတျကွညျ့ကွပါလို့….
Related Article >>> ဆိမျ့ဆိမျ့ခြိုခြိုအရသာလေးကွောငျ့ စားပွီးရငျးစားခငျြနမေယျ့ အုနျးစိမျးဂယျြလီကြောကျကြောလုပျနညျး
နို့စိမျးခေါကျဆှဲခကျြဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေတော့ –
Related Article >>> ဆေးဘဲဥကို ညှီနံ့မထှကျဘဲ အရသာရှယျထှကျအောငျ ကိုယျတိုငျသုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျး
၁-ကွကျသားကို ခပျသေးသေးအတုံးလေးတှတေုံးပွီး ကွကျသားမှုနျ့ ၊ နနှငျးလကျဖကျစားဇှနျးတဈဇှနျး ရောထညျ့ ၊ သမအောငျနယျပွီးနှပျထားပါ။
၂-ကွကျသှနျဖွူနဲ့ ကွကျသှနျနီကိုထောငျးပွီး ၊ ငရုတျသီးအစိမျးမှုနျ့နဲ့ရော ၊ ဆီ ဟငျးခပျဇှနျး(၂)ဇှနျးစာ ထညျ့ထားတဲ့ ဒယျအိုးထဲမှာ ဆီမှေးသတျပေးပါ။
၃-ငရုတျသီးအရောငျ နီညိုရောငျသမျးလာပွီဆိုရငျတော့ နှပျထားတဲ့ကွကျသားတှကေို ရောထညျ့ပွီး ၊ ငံပွာရညျထညျ့ ၊ ရမွှေုပျအောငျထညျ့ပွီး တဈရခေမျးသှားတဲ့အထိ ခကျြပေးပါ။
၄-ကွကျသားအိုးခကျြနခြေိနျမှာ ပဲအစိမျးမှုနျ့ကို ရနေို့ဆီဘူး(၃)ဘူးစာလောကျနဲ့ ဖြျောပွီး အိုးတဈအိုးထဲ ထညျ့ကာ ပဲအနံ့သငျးလာတဲ့အထိကြိုပေးပါ။ (အိုးမကပျအောငျ အဆကျမပွတျဖွညျးဖွညျးခငျြးမှပေေးရပါမယျ)
၅-ကွကျသားတဈရခေမျးခြိနျမှာ နို့စိမျးတဈဘူးလုံးထညျ့ခကျြပွီး နို့စိမျးရဲ့အစိမျးအနံ့ပြောကျတဲ့အထိ ခကျြပေးပါ။
၆-နို့စိမျးနဲ့ကွကျသားပေါငျးစပျပွီး အနံ့မှေးမှေးလေးဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ ပဲစိမျးမှုနျ့ကြိုထားတဲ့အိုးထဲ ထညျ့ခကျြပေးပါ။
၇-ပှကျပှကျဆူလာတဲ့အခါမှာတော့ အရသာမွညျးကွညျ့ပွီး အပေါ့အငံစိတျကွိုကျပွုငျနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ထမငျးပိုမွိနျအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့ ဆိတျသားလကျဖကျထောငျးလုပျနညျး
ဒါဆိုရငျတော့ ခေါကျဆှဲ ၊ အကွျော ၊ ပဲသှေး ၊ ငါးဖယျတို့နဲ့ တှဲဖကျစားနိုငျမယျ့ အုနျးနို့အစားထိုး နို့စိမျးဟငျးရညျ ရရှိပါပွီ။ လုပျရတာလှယျကူသလို သှေးတိုးမှာလညျးမကွောကျရတဲ့ နို့စိမျးခေါကျဆှဲမို့ ယောငျးတို့သဘောကလြိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ မှေးမှေးလေးမို့ ခံတှငျးတှမှေ့ာအသအေခြာပါပဲ။
နောကျထပျ ဘယျလိုခကျြနညျးလေးတှေ မြှဝပေေးမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော။
Tagged chicken, Chilli, coconut milk noodle, Food, Garlic, milk noodle, onion, Recipe
Posted on December 23, 2016 December 23, 2016 Author Christina Rosy
အစားအသောက် ဆန်းဆန်းကလည်းကြိုက် လုပ်ရခက်မှာလည်း စိုးရိမ်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ဟောဒီ့မှာ သွားရည်ကျ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကြက်အူချောင်း ထမင်းကြော် ပြုလုပ်နည်းပါ ဆောင်းတွင်းမှာ ပူပူနွေးနွေးထမင်းကြော်ကလေးနဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်လိုက်ရလျှင်ဖြင့် ရင်ရော ဝမ်းပါနွေးသွားမှာပဲနော်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း လွယ်ကူပြီး အချိန် မိနစ်၂၀ပဲ ကြာမယ့် ကြက်အူချောင်းထမင်းကြော်လေးကို ပျိုမေတို့ အားလပ်ရက်မှာ လုပ်စားလို့ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ -နေကြာဆီ ၂ဇွန်း -ကြက်သွန်ဖြူ ၂ဥ (အခွံနွှာ ထုချေပြီး) -ကြက်သွန်မြိတ် အနည်းငယ် -ကြက်/ဝက်အူချောင်း ကြက်သား (ပြုတ်ပြီး အတုံးငယ်လေး ဖြစ်အောင်ပိုင်းထားပါ) -ထမင်း -ကြက်ဥ ၂လုံး -ပဲငံပြာရည် -ဆား -ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ပြုလုပ်နည်း -မီးဖိုပေါ်မှာ ဒယ်အိုးတင်ပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဆီဆူလာတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ […]
ထမင်းမြိန်စေမယ့် ရှောက်သီးသုပ် ချဉ်ငန်စပ်လေးနဲ့ ဘူးသီးဟင်းခါး
Posted on January 26, 2017 September 27, 2017 Author Jasmine
ဘာမှ မစားချင် မသောက်ချင်နဲ့ ခံတွင်းပျက်နေတဲ့ ယောင်းလေးတွေ ရှိကြလား?
Posted on April 13, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
ချိုချဉ်ငန်စပ်လေးစားချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် မင်မင့်နှစ်သစ်လက်ဆောင်။